JOINTS Factory, Suppliers - China JOINTS Abakhiqizi
I-VSSJA-2 (B2F) Type Double Flange Limited Telescopic Joint
Izici zokuklanywa kwemikhiqizo I-budy enkulu yomkhiqizo yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ubulukhuni obuphezulu, kulula ukuyisebenzisa, futhi iyashesha ukufaka. Inokumelana okuhle nokugqwala, ukumelana nowoyela, ukumelana ne-asidi ne-alkali. Umklamo wesakhiwo somkhiqizo unengqondo.Ukusebenza kokubekwa uphawu kunokwethenjelwa. Akukho ukushisela okudingekayo.Kulula ukulayisha nokulayisha, kunganxephezela ukufuduka, ukungahambi kahle nokugoba kwepayipi ngaphakathi kobubanzi obuthile. Isimiso salo sokusebenza silandela ...
Nezimo Rubber Joint
Izici zokusebenza Ijoyini lenjoloba eliguquguqukayo, elibizwa nangokuthi i-vibration absorber, ipayipi lokudlidliza kwepayipi, ukuhlangana okuguquguqukayo kanye nejoyi lokunye nokunye, kuhlanganiswa ipayipi nokuguquguquka okuphezulu, ukuqina komoya ophakeme nokumelana okuhle kwaphakathi nendawo nokumelana nesimo sezulu. Izici zayo zokusebenza yilezi: 1. Isincane ngosayizi, isisindo esilula, inhle ngokuguquguquka, ilungele ukufakwa nokunakekelwa. 2. Ngesikhathi sokufakwa, ukuhanjiswa, ukuhanjiswa kwe-axial kanye ne-angular kuzo ...